ကျမ်းစာရဲ့ အဓိက သတင်းစကားက ဘာလဲ | ကျမ်းစာ အဖြေများ | NWT
ဖတ်လို ကန်နာဒါ ကန်ယန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကမ္ဘောဒီးယား ကာဇက် ကိုရီးယား ကိုရီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီကွန်ဂို ကီရီဘာတီ ကီလူဘာ ကော့စတာရီကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကျူးဘား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွန်ဂို ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ခရိုအေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချက် ချက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂရိ ဂရိ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂါ ဂါနာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျမေကန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျားဗား ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွာတီမာလာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂွာရာနီ စပိန် စပိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စလိုဗက် စလိုဗက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စီဘွာနို ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆာလ်ဗေဒိုရန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီလိုဇီ ဆွစ် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဆွီဒင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇင်ဘာဘွေ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇမ်ဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇူးလူး တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇော့ဇီလ် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တရုတ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တဟီတီ တာဂျီကီ တာတာ တာ့ခ်မန် တီဂရင်ယာ တီရှီလူဘာ တူဗာလူ တောင်အာဖရိက လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်ဝမ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ထိုင်း ထိုင်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒတ်ချ် ဒတ်ချ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နိုင်ဂျီးရီးယန်း လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား နီကာရာဂွာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နီပေါ နီအာစ် နော်ဝေ ပနားမား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါရာဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပိုလန် ပိုလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီရူး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပေါ်တူဂီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပြင်သစ် ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖင်လန် ဖိလစ်ပိုင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖီဂျီ ဗင်နီဇွဲလား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဗြိတိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘစ်လာမာ ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘာတက် (ကာရို) ဘာတက် (တိုဘာ) ဘိုင်ကိုးလ် ဘိုလီးဗီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မလေး မလေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာယာ မာရသီ မာလာယာလမ် မိုဇမ်ဘစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မြန်မာ ယူကရိန်း ယူရုဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို ဝါရေး‑ဝါရေး ဝီဂူးရ် (ဆီးရီးလစ်) သြစတြီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား သြစတြေးလျ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အက်စတိုးနီးယား အင်ဇီမာ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်းဒီးယန်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမေရိကန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အမ်ဘွန်ဒူ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အိုင်စိုကို အိုင်ယာလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီကွေဒေါ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အေမာရာ အေးဝေး ဥဇဘက် ဥဇဘက် (ရိုမန်)
ကျမ်းစာရဲ့ အဓိက သတင်းစကားက ဘာလဲ
“မင်း​နဲ့ မိန်း​မကို​ရော မင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်​နဲ့ မိန်း​မရဲ့​မျိုး​နွယ်​ကို​ပါ ငါ​ရန်​ငြိုး​ဖွဲ့​စေ​မယ်။ သူက မင်း​ရဲ့​ခေါင်း​ကို ကြိတ်​လိမ့်​မယ်။ မင်း​လည်း သူ့​ဖနောင့်​ကို ပေါက်ရလိမ့်မယ်။”
“ငါ့​စကား​ကို မင်း​နား​ထောင်​တဲ့​အတွက် ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ​ရှိ​တဲ့ လူမျိုး​အားလုံး​ဟာ မင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်​ကြောင့် ကောင်း​ချီး​ရ​လိမ့်​မယ်။”
“နိုင်​ငံ​တော် လာ​ပါ​စေ။ အလို​တော်​ဟာ ကောင်း​ကင်​မှာ ပြည့်​စုံ​သလို ကမ္ဘာ​မြေမှာ​လည်း ပြည့်​စုံ​ပါ​စေ။”
“ငြိမ်သက်​ခြင်း ပေး​သနား​တဲ့ ဘု​ရား​သခင်​က မကြာ​ခင် စာ​တန်​ကို ခင်​ဗျား​တို့​ရဲ့​ခြေ​အောက်​မှာ ချေ​မှုန်း​တော့​မယ်။”
“အရာ​ခပ်​သိမ်း​ကို သား​တော်ရဲ့​ခြေ​အောက်​မှာ ချ​ထား​ပြီး​တဲ့​အခါ အရာခပ်သိမ်း​ကို ချ​ထား​တဲ့ ဘု​ရား​သခင်​ကို သား​တော်​ကိုယ်​တိုင် လက်​အောက်​ခံ​လိမ့်​မယ်။ အဲဒီ​အခါ ဘု​ရား​သခင်​ဟာ လူ​အားလုံး​ရဲ့ တစ်ပါး​တည်း​သော အုပ်​စိုး​ရှင် ဖြစ်လိမ့်မယ်။”
၁ ကော​ရိန္သု ၁၅​:​၂၈
“ဘု​ရား​သခင်​က အာဗြဟံ​နဲ့ သူ့​မျိုး​နွယ်​ကို ကတိ​ပေး​ခဲ့​တယ်။ . . . ခ​ရစ်​တော်ကို​ ရည်​ညွှန်း​ပြီး ‘မင်း​ရဲ့​မျိုး​နွယ်’ လို့​ပြော​ထား​တယ်။ ဒါ့​အပြင် ခင်​ဗျား​တို့​ဟာ ခရစ်တော်​ပိုင်​ဆိုင်​သူ​တွေ ဖြစ်​တဲ့​အတွက် အာဗြဟံ​ရဲ့ မျိုး​နွယ်​စစ်​စစ်​ပဲ။”
ဂလာ​တိ ၃​:​၁၆၊ ၂၉
“လော​က​နိုင်​ငံ​ဟာ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့​နိုင်​ငံ​နဲ့ ခ​ရစ်​တော်ရဲ့​နိုင်​ငံ ဖြစ်​ပြီ။ ဘု​ရား​သခင်​က ဘု​ရင်​အဖြစ် အစဉ်​ထာ​ဝ​ရ အုပ်​စိုး​တော့​မယ်။”
“ဒါ​ကြောင့် လူ​နေ​ထိုင်​ရာ မြေတစ်​ပြင်​လုံး​ကို လှည့်​စား​သူ၊ မာရ်​နတ် စာတန်လို့​ခေါ်​တဲ့ ရှေး​မြွေဟောင်း၊ န​ဂါး​ကြီး​ဟာ မြေကြီး​ပေါ် ပစ်​ချ​ခံ​ရ​တယ်။ သူ​နဲ့​အတူ သူ့ရဲ့ ကောင်း​ကင်​တ​မန်​တွေ​လည်း ပစ်​ချ​ခံ​ရ​တယ်။”
“သူ​က မာရ်​နတ် စာ​တန်​လို့​ခေါ်​တဲ့ ရှေး​မြွေဟောင်း န​ဂါး​ကြီး​ကို ဖမ်း​ပြီး အနှစ် ၁,၀၀၀ ချည်​နှောင်​လိုက်​တယ်။”
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ကျမ်းစာရဲ့ အဓိက သတင်းစကားက ဘာလဲ
nwt စာ. ၁၂-၁၃